नेपाल आज | औषधीको सही प्रयोग किन जरुरी ? (भिडियोसहित)
औषधीको सही प्रयोग किन जरुरी ? (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । अहिलेको मौसममा विरामी नहुने अक्सर कमै होलान् । अझ म विरामी भएको छैन भन्ने व्यक्ति पाउनु त असम्भव नै छ । त्यसमा पनि नसर्ने रोगका विरामी दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । अर्कोतर्फ रोग लाग्छ एक गिलास तातोपानी खान दिनेसमेत कोही हुन्न ।
हुन पनि अधिकांशका छोराछोरी विदेशमा छन् । बाबुआमा नेपाल छाड्न चाहँदैनन् । दीर्घकालिन रोग लागेकालाई वृद्धावस्थामा ओखती किनिदिनेसमेत कोही नहुँदा सारथी बनेको छ –‘नेपाल मेड’ । नेपाल मेडकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् – सुप्रिया शाक्य श्रेष्ठ ।
नेपाल मेडले विरामी भएकाहरुलाई औषधी मात्र उपलब्ध गराउँदैन, विरामीको ल्याब टेष्ट, सर्जिकल सरसामान, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री पनि उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि अनलाइनमार्फत औषधी अर्डर गर्नुपर्छ । नेपाल मेड खुलेको २ वर्ष बढी पुगेको छ ।
उनी भन्छिन् –‘ अनलाईन र अफलाइन दुवैमा हामी उपलब्ध छौँ । सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो पेज छ । त्यसमार्फत र हाम्रो अफिसमा सम्पर्क गरेर पनि हामीसँग औषधी लिन सकिन्छ ।’ त्यसोभए डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्शन अनुरुपकै औषधी पाइन्छ त ?
उनी भन्छिन –‘पाइन्छ । सकेसम्म डा.ले प्रेस्क्राइब गरेकै औषधी हामी २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउँछौँ ।’ नेपाल मेडको यो सुविधा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभर मात्र छ । ‘निकट भविष्यमा हामी देशका अन्य भागमा पनि पुग्छौँ ।हाम्रो मुलभूत् उद्देश्य सेवा नै हो ।’
नेपाल मेडले औषधी मात्र उपलब्ध गराउँदैन औषधी खाने तरिकासहित परामर्श पनि उपलब्ध गराउँछ । सुप्रियाका अनुसार औषधी खाने तरिका पनि आ–आफ्नै हुन्छ तर मानिसहरु औषधी आफूखुशी लिन्छन् । उनले औषधी खाने तरिकाका बारेमा पनि भिडियोमा विस्तृतमा कुराकानी गरेकी छिन् ।